Chin World | Archive | Chin News | 3
Home » Archives by category » Chin News (Page 3)
အစိုးရက ရိုးရာတူမီးသေနတ်တွေ သိမ်းတော့မယ်တဲ့လား…
Posted on September 11, 2017 by Admin and saved under Article, Chin News
အစိုးရက ရိုးရာတူမီးသေနတ်တွေ သိမ်းတော့မယ်တဲ့လား… Salai Ceu Bik Thawng September 11, 2017 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို အလေးထားတဲ့ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရကို မိမိအနေနဲ့ အထူးလေးစားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုင်းစင်မဲ့ ရိုးရာချင်းတူမီးသေနတ်တွေအားလုံးကို ပြည်နယ်အစိုးရက သိမ်း(ဖျက်ဆီး)မယ်ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပေါင်းရှင်းရင်း မြက်နဲ့စပါး ရောနှုတ်လိုက်သလိုမျိုးနဲ့ အလားသဏ္ဍန်တူတယ် လို့ထင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကလည်း ကျန်တော်တို့ ချင်းပြည်နယ်ရှိ တူးမီးသေနတ်ပေါင်း တစ်သောင်းကျော် သိမ်းခဲ့ဖူးတာကိုလည်း ပြေးမြင်မိတယ်။ လိုင်စင်မရှိလို့ သိမ်းမယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပြီ – ဒါဆိုရင်လိုင်စင်သိမ်းမယ့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရက လိုင်စင်(သစ်)ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်အာဏာရော ရှိသလား။ တစ်နည်းအားဖြင့် လိုင်စင်တောင် မထုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူက အဲလိုသိမ်းမယ်ဆိုတာကတော့ မတရားတဲ့အပြင် သံသယ၀င်စရာဖြစ်တယ်။ ခိုင်းတဲ့သူများရှိလို့လား……
မချမ်းသာသော်လည်း ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့ ချင်းပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင် ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဥက္ကဌDr. Hmuh Thang ဆို
Posted on August 30, 2017 by Salai CLian and saved under Chin News
ချင်းပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင် ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဥက္ကဌDr. Hmuh Thang မှ မချမ်းသာသော်လည်း ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့ ပြောကြားလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ချင်းပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင် ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဥက္ကဌDr. Hmuh Thang မှ “နိူင်ငံတော်တော်များများ ချမ်းသာပေမယ့် ပြည်တွင်းအေးချမ်းမှုမရှိတာကြောင့် ပြည်သူများဟာ ပျော်အောင်မနေနိူင်ကြဘူး။ ကျတော်တို့ ချင်းပြည်နယ်ဟာ တွင်းထွက်သယံဇာတမရှိပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ နေနိူင်ဖို့ လုပ်ဆောင်သွားမယ်” ဟု ဆိုသည်။ ဒေါက်တာမှုထန်မှ Fidi Foundation ကဦးစီးကျင်းပတဲ့ ထန်တလန်မြို့ တီဘီစီ ခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “ပြည်သူနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြား ဆက်ဆံရေး” ဆွေးနွေးပွဲတွင် ယခုလို ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “လူဆိုတာ ပိုက်ဆံကြောင့် ပျော်တာမဟုတ်ဘူး။ ချမ်းသာမှုဆိုတာလည်း လူတွေရဲ့…
Posted on August 10, 2017 by Admin and saved under Chin News
၂၀၁၇ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ချင်းကစားသမား (၇) ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည် Chin World Media August 10, 2017 မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့၌ လာမည့် သြဂုတ်လ (၁၉) မှ သြဂုတ်လ (၃၀) အတွင်း ကျင်းပမည့် ၂၉ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားစကားပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ချင်းအားကစားသမား (၇) ဦးလည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဟု သိရသည်။ ယခုနှစ် SEAGames ပြိုင်ပွဲတွင် အားကစားနည်း (၃၈) မျိုး ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့သည် အားကစားနည်း (၂၉) ၌ အားကစားသမား (၄၀၀) ခန့် ဖြင့် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟုသိရသည်။ ချင်းအားကစားသမား (၇) ဦးမှာ- မြှားပစ်အားကစားတွင် (၄) ဦး၊ ဟော်ကီ(အမျိုးသမီး)တွင်…
Posted on July 23, 2017 by Admin and saved under Chin News
ဖလမ်းမြို့တွင် ပညာရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲပြုလုပ် Chin World July 24, 2017 ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့တွင် ဇူလိုင် (၂၂) ရက်နေ့၌ ပညာရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲ တခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ပရိတ်သတ် (၁၁၀) ခန့် တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ဖလမ်းမြို့၊ FBA ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သော Major Awareness နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲအား Global Falam Youth Organization (GFYO) မှ စီစဉ်ကျင်းပခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ GFYO ၏ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သော Salai Bawibawi Van Bawi Lian မှ “ဒီအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က- ၁၀ တန်းအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့လိုင်းတွေရွေးချယ်တဲ့အခါ၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတာ၊ ကြိုက်တာမျိုးတွေထက်၊…